Somaliland: Carwada ganacsiga oo bilaabatay - BBC News Somali
Somaliland: Carwada ganacsiga oo bilaabatay
Image caption Liimo iyo qudaar kale oo ka soo baxa beeraha waddanka.
Magaalada Hargeysa waxaa maanta rasmi ahaan uga bilaabmay carwada ganacsiga ee Hargeysa oo sanadkii saddexaad la qabtay.
Cali yusuf oo ka mid ah ganacsatada soo qabanqaabisa carwadan, ayaa sheegay in sanadkan ay ka soo qayb galeen in ka badan afartan sharikadood iyo meherado ganacsi oo waddani ah oo kala duwan.
Waxaa uu intaa ku daray in sidoo kale ay joogaan carwadan ilaa ku dhowaad labaatan sharikadood oo ka kala socda Djabouti iyo Yemen.
Waxyaabaha lagu soo bandhigay carwadan waxaa ka mid ah wax soo saarka wershedaha ee fudud sida biyaha, sharaabka, waxyaabaha la isku qurxiyo, iyo macmacaanka.
Waxaa kaloo ka mid ah wax soo saarka beeraha siiba khudaarta, iyo weliba alaabta hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Ganacsatada Yemen waxay ku soo bandhigeen alaabooyin u badan kuwa caaga laga sameeyo ee weelka ah. Ganacsatada Djibouti waxay keeneen qoraallo iyo boostaro oo ay ganacsigoooda wakiillo ugu raadinyaan Somaliland.
Weriyaha BBC ee Hargeysa Axmed Saciid Cige, oo tegay goobta carwadan oo dad kala duwan kula kulmay wuxuu ku soo waramayaa in carwadani oo socon doonta shan maalmood ay fursad u siineyso dadweynaha inay badeecadaha lagu soo bandhigay ay qiime rakhiis ah ku iibsadaan oo loo jebiyay, sida ay sheegeen qabanqaabiyaasha carwadu.